မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ SSD ကို INSTALL လုပ်နည်း - DISK ကို - 2019
မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ SSD ကို install လုပ်နည်း
မင်္ဂလာပါ SSD ကို drives တွေကိုနေ့တိုင်း aftermarket အတွက် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာရသည်။ မကြာခင်ပဲငါသူတို့တစ်တွေဇိမ်ခံ (အချို့အသုံးပြုသူများသည်နှင့်အညီအနည်းဆုံး, သူတို့ရဲ့ဇိမ်ခံ) ထက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
တစ်ဦး SSD ကိုလက်တော့ Installing အများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်: OS ကို Windows ကို (download, အချိန် 4-5 ကြိမ်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်), လက်ပ်တော့ဘက်ထရီရေရှည်စစ်ဆင်ရေး၏ပုံတွေကို loading, SSD ကို disk ကိုခေါက်ဖို့ပိုပြီးခံနိုင်ရည်နဲ့လာပြီးတစ်ခါတစ်ရံအချို့မော်ဒယ်များအပေါ်ဖြစ်ပျက်ရသော rasp (HDD ပျောက်ကွယ်သွား discs တွေကို) ။ ဤဆောင်းပါး၌ငါ (အထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် SSD ကို၏မေးခွန်းများကိုအများကြီးလာ) ကလက်တော့အတွက် SSD ကို drive ကို install ဖို့အောက်ကခြေလှမ်းထွက်စေချင်တယ်။
SSD ကို disk ကို၏ installation ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း - သင့် fuck ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ပြု - နီးပါးမည်သည့်အသုံးပြုသူနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှရာနှင့်အတူရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်, ငါသည်သင်ပါဘူးဘာမှကိုသင်တို့အားသတိပေးချင်တယ်။ ဒါ့အပြင်အချို့ကိစ္စ၌, တခြား disk ၏ installation အာမခံ၏ငြင်းပယ်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုငျပါသညျ!
1. Laptop ကိုနှင့် SSD ကို disk ကို (သဘာဝကျကျ) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 1. Disk ကို SPCC Solid State Disk (120GB) မောင်း
2. Phillips ကနှင့်ဖြောင့်ဝက်အူလှည့ (အများဆုံးဖွယ်ရှိပထမဦးဆုံး, သင့် Laptop ကို lids ဖူလုံရေးအပေါ်မူတည်) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 2. Phillips ကဝက်အူလှည့
(ထို Drive နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှတ်စုစာအုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်သောအဖုံးချိတ်ဖို့အဆင်ပြေအသုံးပြုအတွက်မဆို,) 3. အဆိုပါပလပ်စတစ်ကဒ်။
4. က USB flash drive ကိုသို့မဟုတ်ပြင်ပ hard drive ကို (သင်ရုံ SSD ကိုရန် HDD ကိုအစားထိုးလျှင် - ထို့နောက်ဖြစ်ကောင်းသင်ဟောင်း hard disk ကိုကော်ပီကူးချင်သောဖိုင်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများနောက်ပိုင်းတွင်သင်အသစ်က SSD ကို drive ကိုတစ်ဦးကို USB drive ကနေသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းလိမ့်မယ်ရှိသည်။ ) ။
SSD ကိုရှေးခယျြစရာ Dial
မေးခွန်းတွေကတစ်ဦးကစာရေးလက်တော့အတွက် SSD ကို disk ကိုတပ်ဆင်ခြင်း option ကိုအပေါ်ထံသို့လာကြ၏။ ကောင်းပြီ, ဥပမာ:
- "ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ခဲ့နိုင်အောင် SSD ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်အဟောင်း hard drive ကိုအသစ်တစ်ခုတဦးတည်း?";
- "ကအစား CD-ROM'a တစ်ခု SSD ကို drive ကို install လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလော";
- " အကယ်. ငါရိုးရှင်းစွာအသစ်တစ်ခု SSD ကို drive ကိုမှအဟောင်းကို HDD ကိုအစားထိုး - ငါသူ့ကိုငါ့အဖိုငျမြားကိုထမ်းသော?" စသည်တို့ကို
ကိုယ့်ကိုယ့်မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ SSD ကိုတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများစွာမီးမောင်းထိုးပြချင်:
1) ရုံဟောင်း HDD ထဲကယူနဲ့ (လက်တော့ပေါ်မှ disk နဲ့ RAM ကိုဖုံးသောအထူးအဖုံးရှိပါတယ်) က၎င်း၏အရပ်ဌာန၌အသစ်တခု SSD ကိုထားတော်မူ၏။ အဟောင်း HDD ကနေသင့်ရဲ့ဒေတာကိုသုံးပါနိုင်ရန်အတွက် - သင် disk ကိုအစားထိုးရန်မတိုင်မီ, သင်သည်တိုးဖို့လိုတယ်, အခြားမီဒီယာပေါ်မှာရှိသမျှ data တွေကို copy ။
2) အစား optical drive ကိုတစ်ဦး SSD ကို drive ကို Install လုပ်ပါ။ သငျသညျအထူး adapter လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ CD-ROM ကိုထုတ် ယူ. (ကြိုတင်မဲ SSD ကို drive ကိုအတွက်ဖြည့်စွက်ထားတဲ့) ကို adapter ထည့်သွင်း: ယေဘုယျအားဖြင့်အောက်ဆုံးလိုင်းကဒီဖြစ်ပါသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းမှာ, ဟုခေါ်သည်: HDD Caddy Laptop ကို Notebook များအတွက်။
သင်္ဘောသဖန်း။ SATA 2nd လူမီနီယမ် Hard Disk ကို Drive ကို HDD Caddy မှ 3. က Universal 12.7mm SATA Laptop ကို Notebook များအတွက်
အရေးကြီး! သငျသညျထိုကဲ့သို့သော adapter ကိုဝယ်လျှင် - ထိုအထူအာရုံစိုက်။ 12.7 မီလီမီတာနဲ့ 9.5 မီလီမီတာ: အဆိုပါအချက်ကို2အမျိုးအစားများသည်ဤ Adapter ကရှိပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ optical drive ကို၏အတိအကျမော်ဒယ်ကိုသိရန်, (ဥပမာ) အ AIDA program ကို run, ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်ရှိ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုရှာဖွေ: သင်လိုအပ်အတိအကျသိ, သငျသညျအောကျပါအလုပျနိုငျသညျ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျရိုးရှင်းစွာ drive ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါနှင့်၎င်း၏အစိုးရသောမင်းသို့မဟုတ်သံလိုက်အိမ်မြှောင်-ချောင်းတွေကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။
3) ဒီဒုတိယဂျများ၏ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါသည်: SSD ကိုထောက်ပံ့ရေးအစားအဟောင်း disk ကို HDD နှင့် HDD ကို install အစားပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့တူညီ adapter သုံးပြီးနှင်ထုတ်။ 3. ဒီ option ကပိုကောင်းတယ် (nama အမြင်) ဖြစ်ပါသည်။
4) နောက်ဆုံး option ကို: အကို USB port ကိုချိတ်ဆက်ရန်, အထူး box ကိုဝယ်ခြင်းငှါအစားအဟောင်း HDD ၏ SSD ကို install လုပ်ပေမယ့် HDD (ပုံ4ကိုကြည့်ပါ) ... ထို့ကြောင့်သင်သည်လည်းသုံးစွဲဖို့တတ်နိုင်နှင့် SSD ကိုနှင့် HDD drive တွေကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါသာအနုတ်လက္ခဏာ - ပိုလျှံဝါယာကြိုးနှင့် (မကြာခဏသယ်ဆောင်ထားတဲ့လက်ပ်တော့များအတွက် - မကောင်းတဲ့ option ကို) ကိုစားပွဲပေါ် box ကို။
သင်္ဘောသဖန်း။ HDD 2.5 SATA ချိတ်ဆက်မှုအတွက် 4. Box ကို
အစားအဟောင်း HDD ၏ SSD ကို drive ကို install လုပ်နည်း
ငါအရှိဆုံးစံများနှင့်မကြာခဏ-ရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက် option ကိုစဉ်းစားပါ။
1) ပထမဦးစွာ, ရှိသမျှကြိုးတွေ (စသည်တို့ကို power supply, နားကြပ်, mouse ကို, external hard drives တွေက) ကနေ Laptop နဲ့အဆက်ပြတ်မှုကို turn off ။ ထို့နောက်ဇောက်ထိုးကလှည့် - ကလက်ပ်တော့ရဲ့အောက်ခြေနံရံပျေါ hard drive ကိုနှင့် Laptop ကိုဘက်ထရီ (ပုံ5ကိုတွေ့မြင် .. ) ဖုံးအုပ် panel ကိုဖွစျရမညျ။ ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းညွန်အတွက်တံခါးကျင်တွန်းအားဖြင့်ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားပါ။ *
သင်္ဘောသဖန်း။ 5. ဘက်ထရီအဖုံးနှင့်လက်တော့၏ပိတ်ပွဲ drive ကိုလုံခြုံအောင်။ Laptop ကို Dell က Inspiron 15 3000 စီးရီး
ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် 2), အခက်ခဲ dik (ကြည့်ပါ။ ပုံဖုံးအုပ်ထားသည့်အဖုံး secure သော screw နှစ်ခုဝက်အူဖြုတ်။ 6) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 6. ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားခြင်း
လက်ပ်တော့များတွင် 3) Hard disk ကို drive ကိုများသောအားဖြင့်မျိုးစုံ cogs ပူးတွဲနေကြသည်။ ကချွတ်ယူ, သူတို့ကဝက်အူဖြုတ်ထို့နောက် SATA connector ကိုထံမှခက်ဆွဲထုတ်ဖို့လုံလောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီနောကျ - ၎င်း၏အရပ်ဌာန၌အသစ်တခု SSD ကို drive ကိုထည့်သွင်းပြုလုပ် cogs fix ရန်။ ဒါဟာအလုံအလောက်ရိုးရှင်း (ပုံ7တွေ့မြင် - .. အဆိုပါ mounting disk ကို (အစိမ်းရောင်မြှား) နှင့် SATA connector ကို (အနီရောင်မြှား) ဖော်ပြပေး) ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 7. လက်ပ်တော့များတွင် disk ကို Mount
4) disk ကိုအစားထိုးပြီးနောက်အဖုံး mount နှင့်ဘက်ထရီအတွက် Cog ထားတော်မူ၏။ (ယခင်ကပြတ်တောက်) ကိုဝါယာကြိုးများရန်သင့် Laptop ကိုချိတ်ဆက်ပါကအပေါ်ကိုဖွင့်။ သငျသညျ boot လိုက်တဲ့အခါသင် (ညာ, BIOS ထဲသို့သော့အကြောင်းကိုဆောင်းပါး go:
ဒါဟာတဦးတည်းအရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်: အ disc ကို, BIOS ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ။ အများအားဖြင့်တစ်ဦးလက်ပ်တော့, ပထမဦးဆုံးမျက်နှာပြင် (ပင်မ) ရက်နေ့တွင်ပြသ, BIOS drive ကိုမော်ဒယ် - ပုံကိုကြည့်ပါ .. 8. drive ကိုအောက်ပါအကြောင်းပြချက်ထို့နောက်သတ်မှတ်မထားလျှင်:
- မကောင်းတဲ့ SATA connector ကိုအဆက်အသွယ် (ဖြစ်ကောင်းအပြည့်အဝ slot ကစ disc ကိုဖြည့်စွက်မဟုတ်);
- ပျက်ယွင်းနေ SSD ကို drive ကို (ဖြစ်နိုင်လျှင်သူကအခြားကွန်ပျူတာပေါ်မှာစစ်ဆေးနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်);
- အဟောင်း BIOS ကိုကို (BIOS ကို update လုပ်ဖို့ဘယ်လို:
သင်္ဘောသဖန်း။ 8. (ဓာတ်ပုံ disk ကို၌သင်တို့ကိုယျတျောနှငျ့အတူအလုပ်မလုပ်ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်, ဆိုလိုတာကအသိအမှတ်ပြုသည်) အသစ်က SSD ကို drive ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်လော။
disc ကိုဆုံးဖြတ်ပါက (AHCI အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်) အလုပ်လုပ်တယ်သောအရာကို mode ကိုစစ်ဆေးပါ။ , BIOS, ဒီ tab ကိုမကြာခဏ, အဆင့်မြင့် (ကြည့်ပါ။ ပုံ။ 9) ။ သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော mode မှာတစ်ဦး parameter သည်ရှိပါက - Achi ပေါ်မှာအကူးအပြောင်း, ထို့နောက် BIOS ကို setting များကိုသိမ်းဆည်းပါ။
သင်္ဘောသဖန်း။ 9. SSD ကို Disk ကို Mode ကို။
အဆိုပါ setting ကိုအောက်ပါ - သငျ Windows နဲ့ SSD ကို၎င်း၏ optimization တပ်ဆင်နိုင်သည်။ စကားမစပ်အဆိုပါ SSD ကို install လုပ်ပြီးနောက်မှ re-install Windows ကိုအကြံပြုသည်။ အလိုအလျောက် SSD ကို drive ကိုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုစီစဉ်ပေးသည် - ကို Windows setup ကိုဆိုတဲ့အချက်ကို။
စကားမစပ်အလွန်မကြာခဏငါ update က PC ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်မေးခွန်းများကိုမေးမွနျးရ (ဒါဘွားကဗီဒီယိုကဒ်, CPU ကိုနှင့်။ ) ။ သို့သော်ခဲမည်သူမဆိုပိုမြန်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက် SSD ကိုရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအပြောင်းအရွေ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ အချို့သောစနစ်များ SSD ကိုမှပြောင်းလဲရန်ပေမယ့် - ကြိမ်မှာအလုပ်အရှိန်မြှင့်ကူညီနိုငျပါသညျ!
ဒီတွင်ယနေ့ငါရှိသည်။ Windows ကိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်အားလုံး!